हजुरबुवाको कुरा कहिल्यै पत्याएनन् तर ठिक भन्थे उनी, जमिनभित्र लुकेको थियो ठूलो रहस्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हजुरबुवाको कुरा कहिल्यै पत्याएनन् तर ठिक भन्थे उनी, जमिनभित्र लुकेको थियो ठूलो रहस्य
एजेन्सी। डेनमार्कका क्लस क्रिस्टिन्सन सानो हुँदा उनका हजुरबुवाले उनलाई धेरै कथाहरु सुनाउँथे । गर्मीको विदामा क्लस हजुरबुवाको फार्महाउसमा बस्न जान्थे । त्यहाँ हजुरबुवाका कथा सुन्न उनलाई निकै रमाइलो लाग्थ्यो ।
एक दिन हजुरबुवाले उनलाई दोस्रो विश्वयुद्धको बेलाको कथा सुनाए । क्लवले यो कथालाई पनि काल्पनिक ठानेका थिए । उनको हजुरबुवाको मृत्युको कैयौं वर्षपछि उनी र उनका १४ वर्षका छोराले बल्ल थाहा पाए कि हजुरबुवाको कहानी सत्य थियो ।
क्लसका अनुसार उनका हजुरबुवा भन्थे कि दोस्रो विश्वयुद्धका बेला उनीहरुको फार्महाउसमा एउटा घटना घटेको थियो । फार्महाउसमा एउटा लडाकू विमान विष्फोटका साथ खसेको थियो । युद्ध चलिरहेका कारण उनी त्यसलाई हेर्न भने कहिल्यै गएनन् । क्लसलाई लाग्यो कि यो कहानी पनि अरु कहानीजस्तै काल्पनिक हो ।
एक दिन क्लसका १४ वर्षका छोरालाई स्कुलबाट एउटा प्रोजेक्ट दिइयो । यो प्रोजेक्ट दोस्रो विश्वयुद्धको जानकारी जुटाउनको लागि दिइएको थियो । क्लसका छोरा आफ्नो प्रोजेक्टका विषयमा मद्दत माग्न क्लससँग आए । क्लसले पनि मजाकमै भने कि हजुरबुवाको फार्महाउसमा हेर्न जाउँ शायद त्यहाँ उहाँको कथावाला विमान भेटिएला ।
क्लस र उनका छोरा फार्महाउस पुगे । त्यहाँ गएर उनीहरुले निकै परिश्रम गर्दा पनि विमानको एक टुक्रा पनि भेट्न सकेनन् । त्यहाँ जताततै जंगली घाँस र रुख थिए । त्यसपछि दुवैले मेटल डिटेक्टरको मद्दत लिए । यति गर्दा पनि केही हात लागेन । अन्ततः क्लसलाई लाग्यो कि उनका हजुरबुवाको यो कथा पनि काल्पनिक नै थियो । उनीहरु फार्महाउसबाट फर्कने तयारी गर्र्दै थिए यत्तिकैमा मेटल डिटेक्टरले तीव्र आवाज दिन थाल्यो ।
दुवैले मिलेर अलिकति खने तर केही भेटिएन । त्यसपछि दुवैले मेसिनको सहयोगले खन्न थाले । करिब १५ फिट खनेपछि उनीहरुले केही भेटे । खन्दै जाँदा उनीहरुले धातुका टुक्राहरु भेट्टाउँदै गए । टुक्राहरु हेर्दा प्रस्ट थियो कि यी विमानका टुक्रा हुन् । खन्दै जाँदा उनीहरुले विशाल इन्जिन भेटे । इन्जिन देखेपछि क्लसले बुझे कि हजुरबुवाको कथा सत्य थियो । त्यो इन्जिन दोसे विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिएको जर्मन सेनाको विमान मेसरमिटको थियो ।
उनीहरु खन्दै थिए र इतिहासका नयाँ पाना खुल्दै थिए । अचानक विमानको इन्जिनपछि उनीहरुले एउटा हात भेटे । हात देखेपछि दुवै डराए । त्यो एउटा जमेको शरीर थियो । शरीरसँग कपडा पनि थिए । कपडामा बाइबल पनि थियो । त्यो लाश त्यही विमानका पाइलटको थियो । क्लसलाई लाग्यो कि अब उनलाई सहयोगको आवश्यकता छ । त्यसपछि उनले पुलिसलाई खबर गरे ।
क्लसको सूचनाको आधारमा पुलिस र विशेषज्ञको टिम घटनास्थल पुग्यो । चिसोका कारण पाइलटको शरीर सुरक्षित थियो जसलाई फरेन्सिक विशेषको टिमले बाहिर निकाल्यो । रेकर्डबाट थाहा भयो कि यी १९ वर्षका पाइलट हेन्स वंडर लिंच थिए जो लिथुआनियाका थिए । सेनाले उनको शव उनको घरमा पठायो जहाँ ७० वर्षपछि उनको अन्तिम संस्कार गरियो ।